Qiimayaasha Muhiimka ah - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
1. Macaamiisha Koowaad
Xamaasad weyn, waxaan ku dadaali doonnaa sidii aan uga caawin lahayn macaamiisheenna inay guuleystaan ​​oo aan hubinno in macaamiisheennu had iyo jeer yihiin ka-faa'iideystayaasha ugu horreeya. Micnaha jiritaankeennu wuxuu ku jiraa bixinta adeegyada dadka kale, macaamiisha, iyo bulshada.
2. Dad u janjeedha
Iyada oo ku saleysan baahida isticmaaleyaasha, waxaan si joogto ah u cusbooneysiinnaa badeecadeenna iyo adeegyadeena.
Maareynta daacadnimada, runta ka raadinaysa xaqiiqda, macaamiisha ha u naseexeen. Waxaan u shaqeynaa daacadnimo, anshax, masuuliyad, cadaalad dhammaan macaamilkeena ganacsi gudaha iyo dibadeed si aan u kasbano una ilaalino kalsoonida macaamiisheena aan jecel nahay. Waxaan ilaalinaa kalsoonida macaamiisheenna, dadka iyo daneeyayaasha.
4. Ku raaxayso Shaqada
Shaqadu waa qayb nolosha ka mid ah. Shaqaalaha Airwoods waxay ku raaxaystaan ​​shaqada waxayna ku raaxaystaan ​​nolosha, iyagoo abuuraya jawi shaqo oo cadaalad ah, furfuran, dabacsan oo firfircoon.
5. Raac Isbedelka, Hal-abuurnimo Joogto ah
Fikirka ma noqon karo mid adag, isbeddelkuna wuxuu abuuraa fursado. Waxaan had iyo jeer raadineynaa xalka ugu fiican oo aan shaqadeena ugu fiicnaano. Waxaan sii wadnaa cilmi baarista R&D waxaanna hagaajineynaa tikniyoolajiyadda iyo adeegga si aan kharashyada u xakameyno si aan ugu guuleysano wax badan ilaha yar.
6. Qiimaha Wadaag
Ku dhiirrigeli xaqiijinta qiimaha, ku qanacsanaanta maaddadu waa uun wax soo saar qiimeynta xaqiijinta. Ku dhiirrigeli wadaagista farxadaha guusha iyo dhibaatada ku guuldarreysiga in la gaaro koritaan guud.
7. Horaantii, Si dhakhso badan, Xirfad badan
Hore u dhaqan oo raadi fursado badan;
Tallaabo qaado si dhakhso leh oo ka faa'iidayso fursado badan;
Noqo qof xirfad leh oo kasbado guul badan.
Hadafkeenu waa inaan noqono bixiye xalka Dhismooyinka Tayada Hawada.